တရုတ် Peugeot အန်းဒရွိုက်ကား DVD, Peugeot 3008 မှာ Android မော်တော်ကား DVD, Peugeot ကို Android 4.4 ကား DVD ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ဖေါ်ပြချက်:Peugeot အန်းဒရွိုက်ကား DVD,Peugeot 3008 မှာ Android မော်တော်ကား DVD,Peugeot ကို Android 4.4 ကား DVD,Peugeot ကို Android 5.1 ကား DVD,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Peugeot အန်းဒရွိုက်ကား DVD
Peugeot အန်းဒရွိုက်ကား DVD ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Peugeot အန်းဒရွိုက်ကား DVD, Peugeot 3008 မှာ Android မော်တော်ကား DVD ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Peugeot ကို Android 4.4 ကား DVD R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
peugeot Berlingo 2019-2020 အတွက် Android ကားအသံလမ်းညွှန်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Peugeot Berlingo 2019 2020 အတွက် Android ကားရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PG 301 2013-2016 ဘို့ကားတစ်စီးခေါင်းကိုယူနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PG 408 2007-2010 ဘို့ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာယူနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PG 3008 5008 Peugeot Partner ကို Android Bilstereo  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PG301 များအတွက် Android မှာ 9.0 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PG 301 2013-2016 ဘို့ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာဆက်စပ်ပစ္စည်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PG408 PG308 2007-2010 အတွက်အော်တိုအညွှန်းမာလ်တီမီဒီယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PG 405 များအတွက်ကားတစ်စီးစတီရီယိုနှင့်မာလ်တီမီဒီယာယူနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PG 3008 5008 PG အဖော်များအတွက် oem ရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PG405 ဘို့ကားတစ်စီးစတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
octa Core 32G ဌာနမှူးယူနစ် Peugeot 405  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PG405 များအတွက် oem ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာကစားသမား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Peugeot PG 408 2007-2010 သည်မော်တော်ကားမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Peugeot PG 405 သည်မော်တော်ကားမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Peugeot PG 3008 2010-2016 သည်မော်တော်ကားပေး Audio Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Peugeot PG 301 သည်ကားတစ်စီးကို DVD Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Peugeot PG408 က Android & 10.1 လက်မကားအသံအီလက်ထရောနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Peugeot PG301 သည် audio ဆက်စပ်ပစ္စည်းကားမာလ်တီမီဒီယာစနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Peugeot 405 ကားကိုမာလ်တီမီဒီယာစနစ်များ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အန်းဒရွိုက် 7.1.1 Touchscreen 2008-2013 Peugeot 3008  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
peugeot Berlingo 2019-2020 အတွက် Android ကားအသံလမ်းညွှန်
အသွင်အပြင်: ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 octa core system၊ 4GB RAM နှင့် 32GB ROM ပါ ၀ င်သည့်အဆင့်မြင့် Rockchip PX5 ပရိုဆက်ဆာ၊ အသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက်ပိုမိုချောမွေ့မြန်ဆန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်မှုမြန်နှုန်း။ ၂) အရည်အသွေးမြင့်သောရေဒီယို IC: NXP TEF6686...
Peugeot Berlingo 2019 2020 အတွက် Android ကားရေဒီယို
Peugeot Berlingo 2019 2020 အတွက် Android ကားရေဒီယို Support GPS + Radio + Bluetooth + USB + AUX In + DVR Input + Easy Connect / Mirror Link + WiFi + EQ + DSP OS: Android9စနစ် CPU ကို: Rockchip PX5 Cortex A53, 8 Core အဓိက Frenqency: 1.5GHz RAM -...
PG 301 2013-2016 ဘို့ကားတစ်စီးခေါင်းကိုယူနစ်
PG 301 2013-2016 ဘို့ကားတစ်စီးခေါင်းကိုယူနစ် နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 operating system ကို,4+ 32G မှတ်ဉာဏ်, Octa-Core CPU, အရည်အသွေးမြင့်စိတ်ကြိုက်ရေဒီယို RDS နှင့်အတူဤယူနစ် PG 301 ဦးခေါင်းယူနစ်။4* 50w...
PG 408 2007-2010 ဘို့ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာယူနစ်
PG 408 2007-2010 ဘို့ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာယူနစ် နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 operating system ကို,4+ 32G မှတ်ဉာဏ်, Octa-Core CPU, အရည်အသွေးမြင့်စိတ်ကြိုက်ရေဒီယို RDS နှင့်အတူ PG 408 အဘို့ဤယူနစ်ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာယူနစ်။4* 50w...
PG 3008 5008 Peugeot Partner ကို Android Bilstereo
PG 3008 5008 Peugeot Partner ကို Android Bilstereo ဤသည်ယူနစ်ဒုတိယအချိန်များအတွက် Peugeot Partner ကို Android Bilstereo ထောက်ခံမှု 1 စက္ကန့်အစာရှောင်ခြင်း Boot တက် (57139853, အခြားစက်တွေကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဖွင့်ဖို့ကို 30 စက္ကန့်ကိုယူ။ ) အန်းဒရွိုက်...
PG301 2013-2016 များအတွက် Android မှာ 8.0 ကားတစ်စီး DVD 1) ကို Android 9.0, CPU ကို: Rockchip PX5 Octa Core, ရမ်: 4GB 2) subwoofer အသံ output ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်နှင့် separately.Screen ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုထိန်းချုပ်ဖို့: သင်ကဒီယူနစ်ပေါ် mirror...
PG 301 2013-2016 ဘို့ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာဆက်စပ်ပစ္စည်း
PG 301 2013-2016 များအတွက် Android မှာ 8.0 PX5 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာဆက်စပ်ပစ္စည်း 1. အဆိုပါပွနျလညျဖှဲ့စညျး menu ကိုတတ်နိုင်သမျှရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူတဲ့က Settings ဧရိယာစေသည်။ ဒါ့အပြင်သင်ပိုမြန်ချင်သောအရာကိုရယူဖို့ Quick Settings...
PG408 PG308 2007-2010 အတွက်အော်တိုအညွှန်းမာလ်တီမီဒီယာ
PG408 PG308 2007-2010 များအတွက် Android မှာ 8.0 PX5 အလိုအလျောက်အညွှန်းမာလ်တီမီဒီယာ ကားမောင်းနေစဉ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သီချင်းတွေကိုသန်းပေါင်းများစွာပျော်မွေ့ခြင်း, လက်အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုလုပ် Bluetooth မှတဆင့်သင့်ဖုန်းမှ Spotify နဲ့ပန်ဒိုရာ stream မှ 1....
PG 405 များအတွက်ကားတစ်စီးစတီရီယိုနှင့်မာလ်တီမီဒီယာယူနစ်
PG 405 များအတွက် Android မှာ 8.0 PX5 ကားတစ်စီးစတီရီယိုနှင့်မာလ်တီမီဒီယာယူနစ် 1. အဆိုပါပွနျလညျဖှဲ့စညျး menu ကိုတတ်နိုင်သမျှရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူတဲ့က Settings ဧရိယာစေသည်။ ဒါ့အပြင်သင်ပိုမြန်ချင်သောအရာကိုရယူဖို့ Quick Settings...
PG 3008 5008 PG အဖော်များအတွက် oem ရေဒီယို
PG 3008 5008 PG အဖော်များအတွက် Android မှာ 8.0 PX5 oem ရေဒီယို 1. ပြင်ပ DVR နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်များလမ်းများပေါ်တွင်သင်၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး,...
PG405 များအတွက် Android မှာ 9.0 ကားတစ်စီး DVD 1) ကို Android 9.0, CPU ကို: Rockchip PX5 Octa Core, ရမ်: 4GB 2) subwoofer အသံ output ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်နှင့် separately.Screen ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုထိန်းချုပ်ဖို့: သင်ကဒီယူနစ်ပေါ် mirror...
octa Core 32G ဌာနမှူးယူနစ် Peugeot 405 1, 3D Navigation: အဆိုပါကားတစ်စီးစတီရီယိုမြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှု၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကို real-time အညွှန်း function ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ လက်ရှိတည်နေရာ, အမြန်နှုန်းမိုင်အကွာအဝေး, မြေမှတ်တိုင်အဆောက်အဦး Display, 3D Street...
PG405 များအတွက် oem ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာကစားသမား
PG405 များအတွက် PX5 oem ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာကစားသမား navigation အွန်လိုင်း, အော့ဖ်လိုင်းမြေပုံသုံးပြီးသို့မဟုတ်မြေပုံကဒ်ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်လွယ်ကူစွာအောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာလျင်မြန်စွာ Google Maps ကို, Waze အားစသည်တို့ကဲ့သို့အလုံးကိုအညွှန်း apps များ...
Peugeot PG 408 2007-2010 သည်မော်တော်ကားမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို
Peugeot PG 408 2007-2010 သည်မော်တော်ကားမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို Peugeot PG 408 2007-2010 သည် 1.Car မာလ်တီမီဒီယာ Player ကိုဟာ android အပါအဝင်ခြင်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
Peugeot PG 405 သည်မော်တော်ကားမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို
Peugeot PG 405 သည်မော်တော်ကားမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို android ဖုန်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince အပါအဝင် Peugeot PG 405 သည် 1.Car မာလ်တီမီဒီယာ Player ကို, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
Peugeot PG 3008 2010-2016 သည်မော်တော်ကားပေး Audio Player ကို
Peugeot PG 3008 2010-2016 သည်မော်တော်ကားပေး Audio Player ကို android ဖုန်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince အပါအဝင် Peugeot PG 3008 2010-2016 သည် 1.Car ပေး Audio Player ကို, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
Peugeot PG 301 သည်ကားတစ်စီးကို DVD Player ကို
Peugeot PG 301 သည်ကားတစ်စီးကို DVD Player ကို android ဖုန်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince အပါအဝင် Peugeot PG 301 သည် 1.Car DVD ကို Player ကို, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက်7နှစ်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူကျနော်တို့ဂျပန်,...
Peugeot PG408 က Android & 10.1 လက်မကားအသံအီလက်ထရောနစ်
Peugeot PG408 က Android & 10.1 လက်မကားအသံအီလက်ထရောနစ် 1. Peugeot PG408 က Android & 10.1 လက်မကားအသံအီလက်ထရောနစ်ဒီမော်ဒယ်ယခုအလွန်တည်ငြိမ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ OEM ဝန်ဆောင်မှုလက်ခံပါ။ သင်ကလိုဂို, ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် UI...
Peugeot PG301 သည် audio ဆက်စပ်ပစ္စည်းကားမာလ်တီမီဒီယာစနစ်
Peugeot PG301 သည် audio ဆက်စပ်ပစ္စည်းကားမာလ်တီမီဒီယာစနစ် 1. Peugeot PG301 သည်အသံဆက်စပ်ပစ္စည်းကားမာလ်တီမီဒီယာ System ကိုဒီမော်ဒယ်ယခုအလွန်တည်ငြိမ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ OEM ဝန်ဆောင်မှုလက်ခံပါ။ သင်ကလိုဂို, ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် UI...
Peugeot 405 ကားကိုမာလ်တီမီဒီယာစနစ်များ
Peugeot 405 ကားကိုမာလ်တီမီဒီယာစနစ်များ 1. Peugeot 405 ကားကိုမာလ်တီမီဒီယာစနစ်များ: ပံ့ပိုးမှုလွယ်ကူသော-connected အင်္ဂါရပ်: android စမတ်ဖုန်းနှင့် devices များနှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့, အလွယ်ကူသော-connected အင်္ဂါရပ်သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းများနှင့်ကားကိုဦးခေါင်း...
အန်းဒရွိုက် 7.1.1 Touchscreen 2008-2013 Peugeot 3008
အန်းဒရွိုက် 7.1.1 Touchscreen 2008-2013 Peugeot 3008 1. အမြင့်မြန်နှုန်း 3G & Wi-Fi အင်တာနက်ကို: အဆိုပါစနစ်သည် 3G သို့မဟုတ် Wi-Fi ကနေတစ်ဆင့် surfing အင်တာနက်ထောက်ခံပါတယ်။ ဒါဟာ Wi-Fi module တစ်ခုနှင့်တကွကြွလာ။ သင်, အမြန် Search Box...
တရုတ်နိုင်ငံ Peugeot အန်းဒရွိုက်ကား DVD ပေးသွင်း
* ဒီကားကို DVD player တစ်စတီရီယိုကားတစ်စီး DVD ဖြစ်ပြီး, GPS အညွှန်း function ကိုထောကျပံ့
* ဒီကားကို DVD GPS များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့ 12 လအတွင်းအာမခံပေးခြင်း, CPU Octa-core Rockchip PX5 Cortex A9 ဖြစ်ပါသည်, ပိုပြီးအစွမ်းထက်နှင့်ပိုပြီးတည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမော်ဒယ် * HD ကို Screen ကိုကားရေဒီယို Player ကို။ အဆိုပါရေဒီယို sensitivity ကို setting ကိုမြင့်မားသည်, အသံလက်ခံရရှိမည်, စားပွဲပေါ်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး, ဒါပေမဲ့ sensitivity ကိုနိမ့်သည်မှန်လျှင်, အလိုအလျောက်ထွက် filter နိုငျရရှိခဲ့ FM ရေဒီယိုသာမန်လျှင်မူကား, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ သငျသညျကို manually ကိုကယျတငျနိုငျရေဒီယို၏သူ၏မေတ္တာ, ဤ function ကိုအလွန်အဆင်ပြေသည်။
* ဘလူးတုသ်တိုက်ဆိုင်သည့်နှစ်လမ်းပွဲစဉ်ဖြစ်နိုင်, ဖုန်းဖြေဆိုရန်ဖြေကြားသို့မဟုတ်ကားတစ်စီးမှဖုန်းချိတ်ဆက်ရန်အတွက်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်ဘလူးတုသ်ဂီတ function ကိုထက်လျော့နည်းဖြစ်ပါသည်, သင်တန်း, သင်တို့ကိုဖုန်းရဲ့ဂီတကစားနိုင်ပါတယ်။
Peugeot အန်းဒရွိုက်ကား DVD Peugeot 3008 မှာ Android မော်တော်ကား DVD Peugeot ကို Android 4.4 ကား DVD Peugeot ကို Android 5.1 ကား DVD Opel အန်းဒရွိုက်ကား DVD